Ogaden News Agency (ONA) – Canbaareyn shirkii bahdilka odayaasha iyo baaq ay jaaliyadda Denmark u soo gudbisay jaaliyadaha
Canbaareyn shirkii bahdilka odayaasha iyo baaq ay jaaliyadda Denmark u soo gudbisay jaaliyadaha
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 02/12/2012 ka dhacay caasimada wadankaDenmarkeeCopenhagenshir ay isugu yimadeen jaaliyadda S.Ogadenya. Shirkan oo si fiican loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgaley Oday-Dhaqameedka, Waxgaradka, Aqoonyahanka, Hooyooyinka, Dhalinyarada iyo dhamaan laamaha bulshada ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ee ku dhaqan magaalo madaxda wadanka Denmark waxay canbaarayn kulul usoo jeedinayaan xadgudubyada kadhanka ah banii,aadanimada ee uu gumaysiga Itoobiya iyo wakiiladiisa eey ku hayaan habeen iyo maalinba shacabka biri-magaydada ah een waxba galabsanin ee kudhaqan wadanka Ogadenya.
Waxay canbaarayn kulul usoo jeediyeen kasoo qaybgalayaasha kulankan shirkii uu gumaysigu sida xaqdarada ah ku keenay odayaasha iyo dad shacab ah si loo bahdilo looguna xad gudbo karaamadii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka banii,aadamka ah ee in la,ilaaliyo ey waajibka ahayd. Kulanka oo si qotodheer loogu lafaguray waajibaadka iyo kaalinta kaga aadan shacabka S.Ogadenya ee ku dhaqan wadamada xorta ah sideey ooga qayb qaadan lahayeen ladagaalanka gumaysiga iyo wakiiladiisa aan damiirka lahayn ee ku naaxay dhiiga bulshada Ogadenya. Waxaa kale oo khudbado iyo warbixino dhaxalgal ah kasoo jeediyay madasha shirka xubno iyo masuuliin kamid ah Jaaliyada S.Ogadenya ee wadankaDenmarkkudhaqan iyo marti-sharaf kale oo kulanka lagu casuumay.
Dhanka kale waxaa dhaqaajiyay damiirka iyo shucuurka dhamaan kasoo qaybgalayaasha shirka warbixin aad uqiiro iyo naxdin badan oo uu soo bandhigay muwaadin kamid ah shacabka S.Ogadenya ee wadankaDenmarkkudhaqan oo mudo aan fogayn kasoo laabtay safar uu kutagay wadanka Ogadenya. Muwaadinkan oo aad uqiiraysan kana dhiidhiyay dhibaatooyinkii uu indhihiisa kusoo arkay intii uu wadanka joogay oo laf ahaantiisu lakulmay dhibaatooyinka shacabka laguhayo qaar kamid ah, isagoo mudo dheer gumaysiga uxidhnaa danbi la,aan, wax maxkamad ahna aan waligii lahorkeenin jidh-dil iyo dhibaatooyin bandanna kala kulmay gumaysiga Itoobiya iyo wakiiladiisa.
Kulankan oo jawi aad u wanaagsan kusoo gabagaboobay ayaa si wanaagsan waxaa la,isugu afgartay balaadhinta iyo dardar galinta taageerada halganka, waxaa kale ooy kasoo qayb galeyaashu oogu baaqayaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee damiirka leh iney ka dhiidhiyaan kana hortagaan falalka foosha xun ee dhaqanka iyo anshaxa Somaalinimada iyo islaamnimada kasoo horjeeda ee gumaysiga Itoobiya uu kula dhaqmayo shacabka S.Ogadenya een waxba galabsanin kadib markii uu gumaysigu guul darro iyo khasaare laxaad leh eey kasoo gaadhay xaga siyaasada iyo ciidankaba.
Waxay kasoo qaybgaleyaasha shirku oogu baaqayaan odoyaasha iyo dhamaan shacabka S.Ogadenya ee dulman ineey ku samraan dhibaatooyinka joogtada ah ee gumaysiga iyo dabadhilifkiisu kuhayaan, iyagoo talo saaranaya Rabbi (CW) isla markaana kaga hortagaya xeeladaha iyo dhagarta gumaysiga.
Midnimo, mintid iyo isku tashi.
faysal maxud clwali says:
dhibatooyinka murugada leh eeka dhacaya ogaadeenya ogaa deenya waxaa ka jira gumaad aad u ba an oo aysan qiimayn karin cida aan indheheeda ku arki rain anigu waxaan lugtayda ku maray dhmaan deegaanka tuulo kasta iyo magaalo kasta waxaa dhimatay bulshada reer ogaadeenya sedex diisano ee ugu horaysay ded gaadhaya ilaa1o kun ooqof oo ay layeen 7 tod badii regmanti ee ugu horeeyey as askii liyuu polis dedkani waxay u dhiten iyogoon hubaysnayn waxaad tihiin taageero onlf bulshadaniwaxay ku dhimatay fiiq wardher dhegax buur tuuloo iyinka iyo qabaleeya waxaa wadanka ka dhaca dhibaa tooyin uusan caalamku arkin
fadlan ila soo xidhiidha